shirkad uu bilaabay wiil soomaali ah oo heshay 12 milyan oo maalgelin ah - NorSom News
shirkad uu bilaabay wiil soomaali ah oo heshay 12 milyan oo maalgelin ah
Shirkada Zoopit oo uu aas-aaskeeda wax kulahaa Shafi Aden oo ah wiil dhalinyaro soomaali norwiiji ah ayaa heshay lacag dhan 12 milyan NOK oo maalgelin cusub ah. Lacagtaas oo ay ku maalgashteen shirkadaha kala ah Schibsted iyo Norgesgruppen. Zoopit oo ay Shafi iyo wiil kale wada aas-aaseen sanadkii 2013 ayaa keentay qaab cusub oo isku xiri karta dukaamada raba in alaab loo qaado macaamiisha joogto guryaha iyo baabuurta banaan ee diyaar u ah inay alaabtaas qaadaan. Waxaana mar hore shirkadan saamigeeda ugu weyn gatay Schibsted oo ah shirkada leh milkiyada wargayska ugu waaweyn wadanka sida Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad iyo waliba finn.no. Hadana waxaa saami kamid ah Zoopit gatay shirkada kale ee NorgesGruppen oo ah shirkada iska leh dukaamada cuntada iyo adeega ee ugu waaweyn wadanka, sida KIWI, Meny, Joker iyo Spar.
Shirkada NorgesGruppen ayaa sidoo kale kusoo biirtay macaamiisha Zoopit, maadaama uu dhawaan dukaanka Meny uu bilaabay qayb cusub oo online ah, oo adiga oo gurigaaga joogo aad dalban karto alaabtaada, isla markaana laguugu keeni doono isla gurigaaga. Waxayna Zoopit iyo Meny sidaas ugu soo biireen dagaalka ka dhex socdo shirkadaha cuntada ku iibiyo qaabka online-ka ah, iyada oo suuqan sanadkii walbe laga dhaliyo lacag dhan 1,5 bilyan NOK. lana rajeynayo in lacagta laga dhalino suuqan ay kor u kacdo oo gaarto afar ilaa 10 bilyan afarta sano ee soo socota.
Shafi Aden oo u waramayay wargayska ka hadla arimaha dhaqaalaha ee Dagens Næringsliv ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay in ay shirkada Norgesgruppen kusoo biirtay macaamiisha shirkadiisa, isaga oo sheegay in tani ay cadeyn u tahay qiimaha(kvalitet)shirkada Zoopit. wuxuu kaloo inta ku daray in heshiiskan uu yahay guul weyn oo ay soo hoyiyeen, maadaama bilihii ugu danbeeyay oo dhan ay ka shaqaynayeen sidii heshiiskan loo soo xero galin lahaa. Wax badan ayaan ku fakari jirney inaan soo galno suuqa cuntada iyo adeega. Waa suuq si dhaqso ah u korayo, waxaana rabnaa inaan qayb ka noqono koritaankaas.
Inkasta oo Shafi ama milkiilayaasha kale ee shirkada Zoopit aysan rabin inaan macluumaad dheeri ah ka bixiyaan lacagta ay rajeynayaan inay dhaliyaan, hadana wargayska warbixinta ka diyaariyay ee Dagens Nærensliv ayaa qaba inay isla sanadkanba dhalin karaa lacag gaaraysa ilaa dhowr malyan.
Shafi Aden ayaa sidoo kale ah milkiilaha shirkada Golden Academy oo ah shirkada privet ah oo caruurta ka caawisa casharada iskuulka, sidoo kale bixisa maadooyin u gaar ah. Shafi wuxuu sanadkii 2009 ku guulaystay bilada qofka dhalinyarada ah ee sanadka.
Hadaad maqli jirtay soomaali la leeyahay ceyr bay qaataan oo ma shaqeystaan, hadana baro wiilkan dhalinyarada soomaaliga ee dadaalka ugu jiro inuu wax la qaybsado shirkadaha ugu awooda iyo magaca weyn wadanka.
Xigasho: Dagens Næringsliv
Previous articleBaarlamaanka Norwey oo isku raacay qorshe dhaqaalaha looga jari karo goobaha cibaadada
Next articleWaad ku mahadsantahay taageeradaada dhaqaale
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (41) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)